အမေရိကန်ရေနံစျေးနှုန်းတွေသော့ချက်အချက်အချာမှာတင်းကျပ်ထောက်ပံ့ရေးအပေါ်မြင့်တက်လာ - သတင်း Rule
US benchmark West Texas Intermediate for May delivery rose $1.07 သို့ $100.26abarrel on the New York Mercantile Exchange.
Wednesday’s EIA report marked the eighth straight week to seeadecline at Cushing, said Robert Yawger, who directs the futures division at Mizuho Securities. Stocks at Cushing are at their lowest level since January 2012, ဟုသူကပြောသည်.
Repost.Us – ဒီအပိုဒ်ပြန်လည်ထုတ်ဝေ
ဤဆောင်ပါး, အမေရိကန်ရေနံစျေးနှုန်းတွေသော့ချက်အချက်အချာမှာတင်းကျပ်ထောက်ပံ့ရေးအပေါ်မြင့်တက်လာ, ကနေစုစည်းတင်ဆက်သည် AFP သို့ နှင့်ခွင့်ပြုချက်ဖြင့်ဤနေရာတွင် posted ဖြစ်ပါတယ်. မူပိုင်ခွင့် 2014 AFP သို့. မူပိုင်ခွင့်များရယူပြီး
19815	0 Cushing, Energy Information Administration, IntercontinentalExchange, လန်ဒန်, Mizuho Securities, New York Mercantile Exchange, Wall Street ဂျာနယ်, ဗုဒ္ဓဟူးနေ့
← Windows XP ကို​​အသုံးပြုသူများနှင့်လာဘ်ထိုး $100 Windows ကိုချွတ် 8 ထုတ်ကုန် ဓာတ်ပုံခွဲဝေမှု features တွေတက် Twitter ကိုရိုး →